The Galaxy A51 na-enweta ihe gam akporo 11 melite na Otu UI 3.0 | Gam akporosis
Mmelite gam akporo 11 na One UI 3.0 na-agbasawanye na ndị ọrụ Galaxy A51
Samsung wepụtara Gam akporo 11 melite na UI 3.0 nhazi usoro maka Galaxy A51, site na mmezu nke nkwa nke onye nrụpụta South Korea mere ọnwa ole na ole gara aga iji nye OTA kwuru na ekwentị a, na mgbakwunye na ndị ọzọ. Nke a malitere ibido na mbido ọnwa na Russia, mana ugbu a ka enwere ndị ọrụ ndị ọzọ.
Na mbu, ama ama batara na ahịa ya na gam akporo n’okpuru usoro nhazi nke UI 2.0. Mgbe ahụ ụlọ ọrụ ahụ wepụtara mmelite One UI 2.1 maka ngwaọrụ a, tupu ịnye gị One UI 2.5.
Ihe ngwanrọ One UI 3.0 nke gam akporo 11 gbakwunyere maka Galaxy A51
Mmelite ọhụrụ maka Galaxy A51 na-agbasa ugbu a na India, mba mbụ ebe a na-enye ya ndị ọrụ ekwentị. Agbanyeghị, a ga-enye ya n'oge na-adịghị anya n'ụwa niile, nke kwesịrị were ụbọchị ole na ole ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ ga-eme, izu ole na ole.
Mmelite nke dị ugbu a na-abịa na ụdị firmware A515FXXU4DUB1. E wezụga iweta atụmatụ gam akporo 11 na One UI 3.0 ọhụrụ, ọ dịkwa Mee ka ọkwa nchedo dị elu ruo na February 2021 ma mejuputa otutu mmezi nke bug, mmezi usoro kwụsiri ike, na otutu njikarịcha maka ahụmịhe onye ọrụ.
Samsung Galaxy A51 bụ smartphone nke arụpụtara na Disemba 2019. Ọ na-abịa na ihuenyo 6.5 nke anụ ọhịa Super AMOLED nwere 2.400-inch na mkpebi FullHD + nke pikselụ 1.080 x 32 na oghere maka igwefoto selfie 2.2 MP na oghere f / XNUMX.
Sistemụ igwefoto azụ nke ọnụ ya dị okpukpu anọ ma ọ bụ onye isi 48 MP na-eduzi ya na oghere f / 2.0, ihe ngosi 12 MP nke nwere oghere f / 2.3, onye na-agba egbe 5 MP na onye ọzọ 5 MP maka foto bokeh ya na oghere f / 2.4 na f / 2.2, dika.
9611nm Exynos 10 processor chipset bụ ike na ọ na-abịa paired na 4/6/8 GB Ram na 64/128/256 GB nke ohere nchekwa. Enwekwara batrị 4.000 mAh nke nwere ngwa ngwa ngwa ngwa 15 W.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mmelite gam akporo 11 na One UI 3.0 na-agbasawanye na ndị ọrụ Galaxy A51
Etu esi agbanwe asụsụ keyboard na WhatsApp
LastPass agakwaghị enwe onwe ya na Machị